Iindaba -Ukunyuka kweNtengiso yeNkampani ngokuchasene neMfuno ebuthathaka kwisiqingatha sokuqala salo nyaka
Ukunyuka kweNtengiso yeNkampani ngokuchasene neMfuno ebuthathaka kwisiqingatha sokuqala salo nyaka
Ukusukela ekuqaleni kuka-2014, amaxabiso ezinto ze-tungsten agciniweyo ayehla, imeko yentengiso ikwimeko engathandekiyo nokuba yeyiphi na kwintengiso yasekhaya okanye kwintengiso yaphesheya, ibango libuthathaka kakhulu. Umzi mveliso wonke ubonakala ubusika obubandayo.
Ukujongana nemeko enzima yemarike, inkampani yenza konke okusemandleni ukwenza imodeli yokuthengisa kunye nokuphuhlisa amajelo amatsha okuthengisa, okwangoku, inkampani ihambisa izinto ezitsha zemveliso kwintengiso ukuze ifumane ithuba elitsha kunye nezabelo ezininzi zentengiso.
Kwisiqingatha sokuqala sika-2015, ukuthengiswa kweemveliso eziphambili kunyukile kwakhona xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, ngesiseko sokuba ukuthengiswa kuka-2014 kunyuke kakhulu xa kuthelekiswa nentengiso ka-2013.
I-Tungsten yentsimbi ye-powders kunye ne-carbide powders yokuthengisa ubungakanani ifikelele kwi-200 yeetoni zeetriki ngenyanga nganye kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Iintengiso zibetha phezulu kwimbali. Kude kube sekupheleni kukaJuni, inani lokuthengisa ngama-65.73% alo nyaka 'wentengiso ecwangcisiweyo, ikwayi-27.88% ephezulu kunentengiso yexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Ubungakanani bentengiso ye-carbides eqinisiweyo yi-3.78% ephezulu kunentengiso yexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Izixhobo ezichanekileyo zokuthengisa ubungakanani ngama-51.56% alo nyaka 'ukuthengisa okucwangcisiweyo, kunye ne-45.76% ephezulu kunentengiso yexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, ikwafikele kwinqanaba eliphezulu lembali.
Izixhobo zokusika iCarbide, Izixhobo zeCarbide, Ikhabhayithi eqinisiweyo, IiMills eziQinisekileyo zeCarbide, Indawo yokuGcina i-Carbide Endmill, Umatshini wokusika,